Cardi B iyo Bruno Mars Dib ugu soo celinta kuleylka "Fadlan" Music Video - TELES RELAY
ACCUEIL » MUSIC Cardi B iyo Bruno Mars Iskuday Kuleylka "Fadlan" Music Video
Cardi B iyo Bruno Mars ayaa la soo gabagabeeyay dhammaadkii wiigga iyadoo la duubay cajaladda muusiga cusub
Suxufiga 26-da sano jir ah iyo fanaanadda 33-da sannadka ayaa hoos u dhigay fiidiyowga muusikada "Fadlan" jimce.
Qiyaastii afar-daqiiqo ee cajaladdu waxay ka dhacdaa makhaayad taco "meel ku taal Los Angeles". Labada fannaani ayaa la arkaa inay la socdaan shaqaalahooda ka dib xaflad. Hase yeeshee waa in ay indhaha iska xirtaan, waxaa jira kiimiko dhaqso ah iyo tiro badan oo ah qoob ka ciyaaro qoob-ka-cayaar.
Fiidiyooga ayaa yimid labo todobaad kadib markii uu dheelitirnaa dhaqdhaqaaqa sii daayay weerarka. Cardi B ayaa aad ugu faraxsanaa mashruuca waxayna ahayd Instagram ee jimicsiga khamiista.
"Waan baqayaa, laakiin, waad ogtahay, waan jeclahay muusigaan," ayay tiri markii ay kudhacday mid cusub qorraxda ' iyo qaar ka mid ah raga madow.
Madaama taageerayaasha ay si fiican u ogyihiin, tani maahan markii ugu horeysay ee labada fanaani ay wada shaqeeyaan. Fannaaniyiintu waxay sidoo kale ku lugleeyeen sheekadooda 2016 "Finesse."
Waxay ahayd sannadkii cusub ee Cardi B. Marka laga reebo in la jiido socodka cusub, waxay ku guulaysatay marka hore Grammy ee category category ee ugu fiican ee loogu talagalay Iskuduwidda Qarsoodiga.
Cardi B Saameynta Shaaha oo buuxa ee gabadha curyaanka ah ee xayawaanka leh
Si aad u aragtid fiidiyowga cusub ee muusikada, oo ku jira dhowr eray oo NSFW ah, fiiri koodhka hoose.
Hambalyo on fiidiyaha music cusub, aad laba!
SOURCE: Cardi B iyo Bruno Mars Iskuday Kuleylka "Fadlan" Music Video
Youtube wuxuu xiraa xisaabaadka kooxda Aqoonsiga Les Brigandes